I-Fiber Optic Patch Cord
Izixhumi ze-Fiber Optic
Izixhumi ezingangeni manzi
I-Fiber Termination Box
Iphaneli ye-Fiber Optic
Ikhebula le-Fiber Drop
Izingxenye ze-Optical Fiber
I-UK Izokwakha I-Optical Fibe Ephelele...
I-UK Izokwakha Inethiwekhi Ephelele Ye-Optical Fiber Ehlanganiswe Ngezakhiwo Eziyizigidi Eziyisi-7 Ekupheleni kuka-2027 Ngokombiko wewebhusayithi yeTelecoms...
I-Ministry of Telecom yaseNdiya: I-5G Spectrum...
I-Ministry Of Telecom Of India: I-5G Spectrum Auction Kulindeleke Ukuba Yenzeke NgoMeyi Indali ekade ilindelwe ye-5G spectrum kulindeleke ukuthi yenzeke...
Idizayini yomkhiqizo / yezimboni
1×128 PLC Splitter LC APC ABS Ibhokisi Op...
I-MPO-MT 12-core Multi-mode 10G OM3 Ribbon ...
I-DWDM 48CH Mux Demux Passive Module 1U Rac...
Inkampani Shenzhen Optico Communication Co., Ltd.
Ineminyaka engu-12 yesipiliyoni sembonini, i-Shenzhen Optico Communication Co., Ltd ingumkhiqizi ohamba phambili wezingxenye ze-fiber optic kanye nomhlinzeki ochwepheshe we-FTTH kanye nesixazululo se-FTTA.
Impahla yethu ihlanganisa imigqa emithathu yokukhiqiza (emibili e-Shenzhen noyedwa e-Ninghai) kanye nesikhungo socwaningo esizinze e-US, kanye nabasebenzi abaqeqeshwe kahle abangu-300, (okuhlanganisa abasebenzi bokukhiqiza, ochwepheshe, onjiniyela bokuthengisa nabaphathi), esiboleka inzuzo yemikhiqizo yokuncintisana. kanye nobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu
Ukwakha ukukhula kwethu ngokubambisana okusondelene nobudlelwano obuhlala isikhathi eside namakhasimende ethu.
Yonke imojula eyodwa ye-optic ihlolwe esikhungweni sokuhlola se-Optico, i-100% iyahambisana nabo bonke abathengisi emakethe.
Gxila ekukhuleni futhi ulwele ukuthola inzuzo esimeme evikela ikusasa lethu.
Lawa mazinga okuphatha ikhwalithi agcinwa yi-International Organisation of Standardization (ISO), ahlinzeka ngenani lezimfuneko zenqubo yebhizinisi zokukhiqiza nokulethwa okungaguquki komkhiqizo ukuze kuhlangatshezwane nokulindelwe ngamakhasimende.
I-FCC iwuphawu lwesitifiketi olusetshenziswa emikhiqizweni ye-elekthronikhi ekhiqizwe noma ethengiswayo e-United States, eqinisekisa ukuthi ukuphazamiseka kazibuthe kagesi kusukela kudivayisi kungaphansi kwemikhawulo egunyazwe i-Federal Communications Commission.Imikhiqizo ye-OPTICO ivumelana ngokugcwele ne-FCC, ehlose ukuphatha igagasi lomsakazo kanye nezinkundla kazibuthe ngokunengqondo.
Ukumakwa kwe-CE kuwuphawu lwaseYurophu oluphoqelekile lwamaqembu athile emikhiqizo ukukhombisa ukuhambisana nezidingo ezibalulekile zezempilo nokuphepha ezibekwe ku-European Directives.Imikhiqizo ye-OPTICO ikhiqizwa ngaphansi kwezidingo ze-CE ukukhombisa ukuhambisana nempilo nokuphepha okubalulekile.
I-CPR, eyaziwa nangokuthi i-Construction Products Regulation.Lo mthetho uthi yonke imikhiqizo edayiswayo noma ethengiswayo eYurophu kufanele ibe nophawu lwe-CE, lapho kukhona izinga elivunyelanisiwe kulo mkhiqizo.Umaki we-CE ukhombisa ukuthi umkhiqizo uhambisana nomthethonqubo.Akusho ngempela ukuthi umkhiqizo uzofaneleka kukho konke ukusetshenziswa kokugcina, kodwa kubonisa ukuthi umkhiqizo uhambisana neSimemezelo Sokusebenza Sawo (DoP), njengoba senziwe umenzi.
© Copyright 20102019 : Wonke Amalungelo Agodliwe. Imigomo yokusebenzisa kanye Nenqubomgomo Yemfihlo
© Copyright - 2010-2019 : Wonke Amalungelo Agodliwe.Omaka, Imikhiqizo efakiwe, Imephu yesayithi, Isizinda Seselula
I-SFP Optical Transceiver, I-XFP Transceiver, I-100G SFP Transceiver, I-10G SFP Transceiver, I-1.25G SFP Transceiver, I-MTP MPO, Yonke Imikhiqizo